[ZIGARA] Android Data ndabere & Weghachi - Ndabere gam akporo maka weghachite / nlele
Ndabere data DataKit Android & Weghachi
Ndabere data ekwentị gam akporo na kọmputa (Windows na Mac).
Weghachi ndabere na gam akporo ekwentị na-enweghị debanyere data ekwentị mbụ.
Tugharia data na nbudata ndabere & weghachite data.
Ndabere Data Ngwaọrụ gam akporo na Windows na Mac
Ndabere Android Data Backup & Weghachi bụ sọftụwia kachasị mma maka sọftụwia ndị ọrụ sọftụwanyere chekwaa data ha na Windows ma ọ bụ Mac. Naanị otu Pịa You nwere ike ịkwado data gam akporo na kọmputa (Lelee Kedu data ị nwere ike ndabere). Site na ya ị nwere ike iweghachi foto, kọntaktị, vidiyo oge ụfọdụ na ekwentị gị ma ị gaghị enwe nchegbu banyere iwefu ha. Naanị jikọta ekwentị gị na kọmpụta ma mee nkwado ndabere ugbu a!
Weghachi data ndabere na ngwaọrụ gam akporo
Na nkwado ndabere nke gara aga, ịnwere ike iweghachi ha na ekwentị gam akporo ngwa ngwa. You nwere ike ịhọrọ iweghachi data ahụ ịchọrọ na ngwaọrụ ahụ. Biko mara na nke ahụ, data weghachiri site na ndabere agaghị ehichapụ data dị na ekwentị gị, nke na-enyere anyị aka mgbe anyị chọrọ ịnyefee data nke ndabere na ekwentị anyị.Lelee ụdị ihe ọ na-akwado).
Devicedị Ngwaọrụ akwadoro na data
Onye nrụpụta na-akwado
Samsung • HTC • HUAWEI • Google (Nexus) • LG • SONY • OnePlus • XiaoMi • OPPO • VIVO • Moto • Lenovo & more
Ngwá ọrụ a na-akwado ụdị ekwentị niile na-agba ọsọ gam akporo os.
Filedị Njikwa akwadoro
Ndi ana-akpo • Ozi • Oku ndekọ • oyuyo oyoyoyo • Vidiyo • Audio • Akwụkwọ
Onye njikwa data ekwentị gam akporo kachasị mma na Windows na Mac
Budata ndabere data Android & weghachi ugbu a!
Anaghị m eji ọrụ nchekwa data na ihe nkesa igwe ojii, echeghị m na nke ahụ bụ nhọrọ echere (nchekwa) maka anyị ime nke ahụ. Ya mere, ana m echekwa data ekwentị na kọmputa m oge niile. Ọ na-enyere m aka ime nke ahụ.
Nwunye m rere ya SAMSUNG C5 zụta ekwentị HUAWEI ọhụrụ, yabụ tupu ekwentị ọhụrụ abịa, m na-akwado data ya ma weghachi ha na ekwentị m. Nke mere na ọ ga na-agabiga ụbọchị echere.
Anyị na-ewepụta data na ọtụtụ ihe na ekwentị anyị, ọ bụrụ na itinye n'ọrụ ndabere n'aka ndị na-emepụta ekwentị, ị ga-akwụkwu ụgwọ ọtụtụ. Yabụ na ngwaọrụ a bụ n'efu na akụkụ a.
Etu esi akwado egwu si na ekwentị gam akporo na PC
Esi ndabere Video site na ekwentị gam akporo na PC
Esi ndabere ekwentị gam akporo
Ndabere WhatsApp Ozi si gam akporo na PC
Ndabere Android SMS & Weghachi
Ndabere na Weghachi Android
Esi ndabere data Samsung Galaxy S ekwentị
Esi ndabere Ndi ana-akpo na Samsung Galaxy S ekwentị
Esi ndabere ederede Ozi na Samsung Galaxy S ekwentị
Etu aga- esi kwado oku oku sitere na gam akporo na PC
Otu esi emeghe gam akporo na PC Na 2018
#1 gam akporo SMS ndabere ngwaọrụ - 1 Pịa ndabere SMS site na gam akporo gaa na PC
Ndabere Ndị ana-akpọ ndabere na ekwentị gam akporo
Imeri Download Imeri Download Nweta nnwale efu site na Email maka nbudata na kọmputa
Note: Ngwaahịa a dị na Windows naanị.